Noho ny Covid-19: mitombo ny fampiasana feo sy sary | NewsMada
Noho ny Covid-19: mitombo ny fampiasana feo sy sary
Nampiova zavatra maro ny fihibohana ho fiadiana amin’ny Coronavirus, anisan’izany ny fivoriana an-tsary na visio-conférence, tsy ilana famonjena toerana iray, ny fanatanterahana asa ampitaina amin’ny serasera (télétravail). Mora ny mampiasa izany ankehitriny noho ny fivoaran’ny teknolojian’ny fifandraisana. Afaka mandray anjara amin’ny fivoriana atao amin’ny alalan’ny visio-conférence ny maro: ny mpandray anjara, ny nasaina, ny mpanentana. Ny fivorian’ny Firenena mikambana (ONU) farany teo, nampiharana ity visio-conférence ity.
Voafetran’ny fihibohana ny fifindra-toerana, mitombo ny fampiasana « efitrano an’eritreritra » amin’ny fitaovana elektronika sy haino aman-jery samihafa. Any Frantsa, « nitombo avo fito heny ny fampiasana sary sy feo hatramin’ny nisian’ny fihibohana », hoy ny filoha tale jeneralin’ny Orange, i Stéphane Richard. Fitaovana sy teknolojia avo lenta avokoa no mahazo laka amin’izao fotoana izao.
Na izany aza, misy fomba fiasa sasany mandany betsaka amin’ny angovo, sy miankina ihany koa amin’ny tsirairay ny fandaniana sy ny fitaovana ampiasana. Amin’ny sary, ohatra, mandany angovo betsaka ny Webex, manaraka ny Zoom, ary ny GoToMeeting no tsy mandany indrindra. Hafa ny saran’ny fifandraisana, miankina amin’ny safidin’ny mpampiasa: miaraka mampiasa feo sy sary, na feo ihany. Ahazoana mampiasa ireo avokoa ny eto Madagasikara, ary tsy vitsy ny orinasa mampihatra izany.